Maitiro Ekutaurirana zvinobudirira Mushure meNarcissistic Relationship - Vanarcissist
Kuti udzidze zvakawanda nezve iyo Beyond Hapana Kubata chirongwa sezvakakurukurwa muvhidhiyo iri pamusoro uye chinyorwa pazasi, tinya pano.
Kudzidza kutaurirana uye kunzwa wakachengeteka kuratidza zvaunoda uye zvaunoda inzvimbo mbiri mune narcissistic kushungurudzwa kupora izvo zvinotora yakawanda yekuzvipira uye kuita.
Kazhinji, kana mupukunyuki wekushungurudzwa achigadzira hukama hutsva, kungave kudanana kana neimwe nzira, vanowanzo kunzwa vakaoma mitezo nepfungwa dzekunyanyisa kunetseka kana kuita pamusoro.
Izvi zvinowanzo kutungamira mukutsvaira zvinhu pasi pemboro uye kudzidza - kamwe zvakare - kuisa zvaunoda pekupedzisira, zvinova izvo zvakamirisana hukama neanorisita zvakakumanikidza iwe kuti uite.
Kana zvasvika pakuumba hutsva hutsva muhukama hutsva, kutya kwekutaurirana uye kutaura-kwako kazhinji zviratidzo zvekuzivikanwa kwekurasikirwa uye C-PTSD, zvese izvi zvinosanganisira mamiriro ekugadzirisa kuchengetedza pfungwa dzako nemaonero ako pachako.
Tisati tapinda mukati, zvakakosha kuti iwe uzive zvingangoitika zvinokonzeresa mukati chero hukama hutsva mushure mekushungurudzwa. Izvi zvinodaro nekuti izvo zvinokonzeresa zvinogona kunge zvisina chekuita newe uye nezvimwe zvine chekuita nekuti iwe unogona kunge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge
zvinorevei kuva muhukama hwakazvipira
Kazhinji, vanhu vanonzwa sekunge vari kuve vanochengetedza, apo dzimwe nguva, vanokonzereswa nekuti vari kubata nemumwe munhu anonyanyisa. Asi, sezvo ivo vakadzidza kufuratira kwavo intuition, izvi hazviuye semureza mutsvuku kwavari.
Asi nekuda kwechinyorwa chino, ndakaronga zvipingamupinyi zviviri izvi, kurasikirwa kwekuzivikanwa uye C-PTSD, muzvikamu zviviri kuzadzisa chinangwa chimwe: Dzidza maitiro ekudzoreredza kutaurirana kwakanaka mushure mehukama hwehunhu.
Ngatipfuurei pamusoro pega chipingamupinyi uye zvekuita.
1. Kurasikirwa Kwekuzivikanwa Mushure meNarcissistic Abuse
Kurasikirwa kwekuzivikanwa hakudziviriki mushure mekuve muhukama hunoshungurudza uye hunyengeri hukama.
Vanhu vanowanzo fananidza kugara narcissist nekugara muchinamato - asi nekutonyanya kuzviparadzanisa.
wakanditora sezvisina basa
Mune chitendero, iwe une vamwe ma comrade vanogoverana zvakafanana kushungurudzwa. Nekushungurudzwa kwe narcissistic, zvakadaro, uri wega wega.
Kungofanana nekugara muchinamato, zvinonzwisisika kuti unzwisise huwandu hwakazara hwekurasikirwa kwehuzivi mushure mekunge wasiya hukama hune chepfu zvachose.
Kudzora kwemunyori pamusoro pendangariro dzavanovavarira dzimwe nguva kune hunyengeri, hwakaomarara, uye hwakadzika midzi zvekuti uyo akapona anotambura kugadzirisa hupenyu hwavo vega mushure mekunge vatanga kupora.
Ini ndaisa pamwechete mimwe mienzaniso yedambudziko rekuzivikanwa kuti ikubatsire kuona kana iwe uri kusangana nekurasikirwa kwekuzivikanwa kuitira kuti utange kuzvichera wega.
Maitiro emaNarcissist Anogadzira Kurasikirwa KweZita Kuzvibata Uye Kudzora Iwe
Nekudaro, iwe ungaudza sei musiyano uripo pakati pesimba rine hutano nekunyengera kwepfungwa? Zvakanaka, hazviwanzo kuve pachena.
VaNarcissist havadi kuti ufunge iwe pachako , vanoda kuti iwe ufunge kwavari .
Iye narcissist ane akati wandei zviwanikwa mubhokisi ravo rekushandisa kuzadzisa ichi chinangwa.
- Kushungurudzika Bonding: Rollercoasters ekurwira kusingaperi (iwe unogara uri munhu akashata, hongu) uye nguva dzinopera dzetsitsi dzekunyepedzera kusimbisa chisungo chakavakirwa padambudziko. Kunze kwekuita mabasa akaita sevana uye mabhiri, idzi pfupi nguva dzekuita senge rudo ndidzo dzinokutadzisa kubva.
- Kunzwisisa Kunzwira tsitsi: Zvinonzwisisika kunzwira tsitsi newe nechinangwa chega chekushandisa pfungwa dzako. Uku kunzwira tsitsi pasina tsitsi chinhu chinodiwa pakutambudzwa. (Verenga chinyorwa changu chakazara pane izvi: Kurwadziswa kwaunoitwa neNarcissist Newe Uchishandisa Kunzwisisa Kunzwisisa )
- Kuisa Mhosva uye Kukosha: Paunoyedza kutaura maonero - kunyangwe pazvinhu zvine moyo kunge zvipfeko - wakanganisa. Uye kunyangwe iwe usiri kukanganisa, iko kungoita chiito chekuva nemafungiro kunogumbura anokanganisa. Izvi zvinokutungamira kuti utende kuti pfungwa dzako hadzina kunaka uye unofanirwa kuteerera kune narcissist kuti akutungamire.
Kurasikirwa zvachose kwekuzivikanwa hakuitike nehusiku. Asi nekufamba kwenguva, narcissist zvishoma nezvishoma anoshandisa aya matekiniki kuti anonoke zvishoma nezvishoma pakuona kwako wega uye nenyika yakakukomberedza.
7 Kuzivikanwa Dambudziko Rezviratidzo Zvinoratidza Iwe Uri Kutambura Kubva Kuzivikanwa Kurasikirwa Pamaoko eA Narcissist
Narcissist achaita zvese zvavanogona kuti vabvise maonero ese, maonero ese, kufunga kwese kwauinako kusvika iwe wasvika pakurasikirwa kwakazara kwekuzivikanwa. Iwe unova kuwedzerwa kwavo.
Izvi zviratidzo zvekunetseka dambudziko zvinogona kukubatsira kuti uzive kana uri kutarisana nekurasikirwa nekuzivikanwa mumaoko ema narcissist.
Iwe shingirira kutaura nezvako kunze kwemazita ekunyepedzera anoshandiswa kwauri narcissist.
Iwe unonzwa kunge hupenyu hwako husina chinangwa chaicho kana kurudziro - asi hautendi iwe unofanirwa nezvinhu zvakadaro.
Usati waita chero sarudzo, unoshamisika kuti narcissist angati kudii kana kuda kuti utaure.
Iwe unonzwa kutya kana kusagadzikana kana iwe usipo kubva kuna narcissist - ko kana iwe ukaita kana kutaura chimwe chinhu zvisizvo ?
Unonzwa kunge ndiwe kurarama pane autopilot . Iwe wave kungoita wekungo teerera muhupenyu hwako.
Iwe haufunge nezvako se change munhu asi chaiko zvakakwana munhu akasiyana. Iwe usazive munhu wawanga uri uye iwe unganzwa kunyara neako wekare 'wakasununguka' wega.
Iwe tarisa zvakanyanya pachitarisiko chako nekuti narcissist anokumanikidza kuenda kana ndicho chete chinobatika chikamu chako iwe chaunogona kuziva chiripo pasina kupokana.
Zviratidzo izvi hazvisi zvakazara rondedzero yemienzaniso yekuzivikanwa kwekurasikirwa, asi zvinofanirwa kukupa iwe zano rakanaka kana uchirwara nazvo.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita.
Iye zvino, ngatikurukurei kuti C-PTSD ingakonzera sei matambudziko nekutaurirana kwakanaka uye kuita kuti zvaunoda zvepamoyo zvisangane.
Iwo Mutauro maNarcissist Vanoshandisa Kuzvibata Uye Kushungurudza Avo Vakatambudzwa
Vakatambudzwa narcissistic kushungurudzwa kazhinji vanosiya hukama hwavo hunotyisa neC-PTSD. Ichi chinyorwa chinomiririra Complex Post-Traumatic Stress Disorder uye inozivikanwawo seNarcissistic Abuse Syndrome.
Kunyange PTSD ichikonzerwa nekusangana nechiitiko chinotambudza zvakanyanya, C-PTSD inoguma kubva mukushushikana kwepfungwa kunogara mukati memamiriro ezvinhu umo nyajambwa anotenda kuti hapana mukana wekutiza. Iko kune kunzwisisika pfungwa yekushaya rubatsiro uye pfungwa yemunhu wega inoparadzwa nekufamba kwenguva.
Ngatitii Judy ari muhukama neNarcissist. Nekuda kwekugeza pfungwa, kuparara kwehukama hwake, uye kugara achingotukwa, iye zvino anotenda kuti haana maturo uye hapana mumwe munhu angamufarira.
Pamusoro pezvo, kaviri kekupedzisira paakaedza kuenda, akashungurudzwa, akatambudzwa, uye akatyisidzirwa kudzamara adzoka. Mupfungwa dzake, hapana kwekutiza. Ari kusangana neC-PTSD.
Kuruboshwe kusarapwa, C-PTSD inogona kutungamira kune zvimwe zviratidzo uye mamiriro anokanganisa nzvimbo dzese dzehupenyu. Izvi zvinosanganisira:
Kusakwanisa kubata kushushikana
Zvinodhaka uye doro kupindwa muropa
Ukama hwakakanganisika nevamwe
Maonero asina kunaka pahupenyu
Kuvhunduka kuve yako yepakutanga manzwiro mamiriro
Kurasikirwa nebasa uye kurasikirwa kwechido chekuita zvibereko
Kuporesa Kuzivikanwa Kurasikirwa Uye Kuwanazve Hutano Kutaurirana Unyanzvi Mushure meNarcissistic Abuse
Sezvakangoita narcissist zvishoma nezvishoma akabvarurwa pahunhu hwako, kupora chako-pachako uye kudzoreredza hunyanzvi hwekutaurirana kuita kunononoka uye kuenderera. Sanganisa aya mapoinzi muchirongwa chako chekuporesa kubva mukurasikirwa nekuzivikanwa.
Zvikomberedze nevanhu vanotsigira.
Dzokera kune vanhu narcissist akamumanikidza kuti usundire kure - ivo vanonzwisisa. Mazhinji anoona chiitiko chako uye unogona kutora hunhu hwavo nenzira ine hutano.
zvinoratidza kuti hukama hwapera
Ita chimwe chinhu narcissist aigara achiti iwe haugone.
Pamwe ichi chinhu chekutandarira, basa, kana chimwe chinhu chawakagara uchida kusangana nacho. Ita chimwe chinhu nekuda kwekuti wako wepamoyo anoda kunze.
Narcissist akakubata kumashure kwenguva yakareba. Inguva yekurarama pane zvaunofunga. Ingo ita shuwa kuti usaite kunze kwekupokana.
Pakutanga, unogona kuwana zvakaoma kutaura nevamwe vanhu uye kuzvisarudzira wega. Izvo zvakanaka kuti usazive zvese nezve iwe parizvino. Ichi chikamu chese chekuporesa kubva pakurasikirwa kwekuzivikanwa.
Kana iwe ukamhanyisa zvakanyanya, unogona kupedzisira waenda mune imwe mamiriro ane chepfu kana kutendeukira kune zvisina hutano zvekushandisa maturusi.
Gadza miganhu uye mira yako ivhu.
Kune zvakawanda zvevanonyengedza uye nevamwe vanhu vanoshusha kunze uko. Izvo zvakakosha kuti uzive panogumira miganhu yako uye unamatire pairi.
Ndekupi kwauchakwevera mutsara pakati pehukama hune hutano uye kurasikirwa kwekuzvizivisa? Ko zvakadii nezvekunzwisisa pakati pekupa zano nekuvaka uye kushoropodza?
Joinha chirongwa chekuvakazve chako chitupa.
Kuvakazve hupenyu hwako uye hunhu hwako hwemukati mushure mekushungurudzwa kwehunhu kunogona kunzwa kuchikurira uye kuchityisa. Asi hazvifanirwe kudaro.
Beyond No Contact idanho-nhanho-nhanho kosi uye nharaunda kwaunodzidza nekurapa kunoshanda uye nehupenyu hutsva nzira, kuti utange kurarama hupenyu hwawakafanirwa kurarama, uye udzore kugona kwako kwekutaurirana zvinobudirira.
Paunozopedzisira waenda 'kusasangana' uye wozvibvisa pane kushungurudzwa kwemu narcissist, unenge uchinzwa kusagadzikana.
Iye narcissist akakushandisa iwe kupinda zvichienderana nekutenderwa kwavo, manzwiro, uye kugara zvakanaka kwenguva yakareba zvekuti kupora kwako-wega kunonzwa kuzvida uye kusiri kwechisikigo.
Hazvisi. Kurapa kubva pakurasikirwa kwekuzivikanwa kunogoneka uye kwakanyatso kudikanwa kuti uzvisunungure kubva kune narcissist kamwe uye zvachose.
Tsamba inokurumidza kubva kuna Steve, muvambi uye mupepeti weA Conscious Rethink: Ndakashanda naKim kwemakore akati wandei uye ndakaendesa vanhu vazhinji kuzvirongwa zvake. Ini ndinogona kumukurudzira zvikuru semumwe wevadzidzisi vane ruzivo munzvimbo yekunetswa yekupora nzvimbo. Kana iwe uchinzwa sekunge unoda rumwe rubatsiro rwakananga munzira yako yekudzoka, usanonoka kujoina chimwe chezvirongwa zvake zviviri: Beyond No Contact uye Iyo Yakakosha Break Mahara Bootcamp. Vanozochinja hupenyu hwako.
Iri peji rine zvakabatana zvinongedzo. Ini ndinogamuchira diki komisheni kana iwe ukasarudza kutenga chero echirongwa chaKim, asi izvi hazvitombokanganisa kurudziro yangu kwavari.
izwi rine simba kudarika rudo
sei kuva mukuru akura
kuunganidza hupenyu hwangu pamwe chete
Push uye dhonza mitambo muhukama